कोरोना भाइरस विरुद्ध परीक्षण भइरहेको चिनियाँ खोपको मूल्य तोकियो, कति तोक्यो खोपको मूल्य ? « Salleri Khabar
कोरोना भाइरस विरुद्ध परीक्षण भइरहेको चिनियाँ खोपको मूल्य तोकियो, कति तोक्यो खोपको मूल्य ?
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध खोप विकासमा अग्रस्थानमा रहेको चीन आधिकारिक तथा गोप्य परीक्षण गर्ने भएको छ । कोरोनाभाइरस महामारी चीनमा सुरु भएर विश्वभरि फैलिएको हो ।
चीनले खोप विकास गरेमा के गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । चीनको कोरोनाभाइरस नियन्त्रयणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ को खोप चीनमा विकास र प्रयोग गरेपछि विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य उत्पादनको रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।
चीनका एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीले गत साता गएको महिनादेखि चीनका प्रमुख सरकारी कर्मचारीहरू माथि खोपको गोप्य परीक्षण गरिएको बताएका छन् । न्याश्नल हेल्थ कमिशनका जेङ जोङ्वेईले सरकारी टीभीमा आफूहरूले आपत्‍कालीन अधिकार प्रयोग गरेर सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा विकासक्रममै रहेका खोप दिएको बताएका छन् ।
तस्बिरमा प्रयोगशालामा एउटी महिलाले खुसी हुँदै एउटा सानो बाकस समातेकी छन् । सिनोफार्मले डिसेम्बरसम्ममा खोप बजारमा ल्याउने आशा गरेर यसको मूल्य १४० डलर (झन्डै १५,००० रुपैयाँ) तोकेको छ ।
डिसेम्बरसम्ममा बजारमा केही खोपहरू आउन सक्छन् । तर आवश्यक पर्ने ठूलो मात्रामा उपलब्ध हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने मलाई थाहा छैन, प्राध्यापक काउलिङले भने । उनको विचारका सन् २०२१ को ग्रीष्मतिर सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ को खोप दिन सकिन्छ ।
चीनले अहिले यूएई, पेरु र आर्जेन्टिनामा हजारौँ व्यक्तिमा आधिकारिक रूपमा खोपको परीक्षण गरिरहेको छ । त्यो सरकार र औषधि कारखानाहरू बीचको विश्वव्यापी सहकार्यको अङ्ग रहेको छ ।
खोप निर्माण गर्न चीन दृढ देखिन्छ । विश्वभरि अन्तिम चरणका परीक्षणमा रहेका छमध्ये आधा खोप चिनियाँ हुन् । विश्वव्यापी परीक्षण खोप विकासको अनिवार्य सर्त हो ।
“उनीहरूले खोपको अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गरेका छन्,” प्राध्यापक काउलिङ भन्छन्, “अनि त्यसको परिणाम पनि अहिले देखिदैँछ।” बिबिसी